Zava-misy ankehitriny « Fanodinana saim-bahoaka avokoa. »
Fanodinana saim-bahoaka na « diversion » avokoa ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny, raha ny fahitan’ny mpanao politika, Dany Rakotoson, azy.
Raha tsiahivina ny tarehimarika nomen’ny banky iraisam-pirenena momba ny harin-karena na PIB eto Madagasikara dia tsy nivoatra mihitsy ny fiainam-pirenentsika nanomboka tany amin’ny 1991 tany ka hatramin’izao. Ny an’ny olona izao, raha raisintsika fotsiny, ohatra, i Kaomoro, hoy izy, raha 1500 dolara ny azy tamin’izany dia efa mba tonga 3000 dolara ankehitriny. Ny antsika tsy nihetsika teo amin’ny 1000 dolara teo. Raha ny zava-misy amin’izao fotoana anefa, hoy hatrany ny fanazavany, dia tsy hananan’ny mpitondra fotoana mihitsy hahafahany miheritreritra izay hahafahana mampitombo ny harin-karena eto izay. Rehefa tsy mazava ny politikan’ny mpitondra, hoy izy, dia ho tratry ny hoditr’akondro eo foana izy. Tsotra anefa ny tetika ahafahana mampandroso dia ny fitantanana mangarahara sy tsy mitanila na « tolérance zéro » ary ny famaritana ny tanjona tiana hahatongavana, hoy izy.